Medical Consumables Vagadziri & Suppliers - China Medical Consumables Factory
Disposable Poda Yemahara Medi...
Isiri-yakarukwa 3ply Disposable S...
Isiri-yakarukwa 3ply Inoraswa M...
Isiri-yakarukwa 3ply Inorasa Kuvhiya Chiso Mask
Ichi chigadzirwa chinoumbwa nezvinhu zvitatu: jira risiri rakarukwa, mhino strip uye elastic band. Iyo mask yekumeso yakakamurwa kuita yemukati, yepakati uye yekunze masiketi, iyo yemukati yakajairwa isiri-yakarukwa jira, yepakati layer ndeye Ultra-yakanaka polypropylene faibha yakanyungudutswa jira, uye yekunze jira risiri rakarukwa kana Ultra-yakatetepa. polypropylene yakanyunguduka-yakavhuvhuta jira. Rwendo rwenzeve rwakagadzirwa nebhande re elastic, iro rakagadzirwa nemucheka usina kugadzirwa nebhandi remukati mukati; zvinhu zvemumhino ishinda yesimbi, iyo yakafukidzwa neyakagadzirwa nesimbi waya zvinhu.
Isina-yakarukwa 3ply Disposable Medical Face Mask
Masks ekurapwa anonyanya kugadzirwa nechikamu chimwe chete kana akawanda emachira asina kurukwa. Iwo makuru ekugadzira maitiro anosanganisira meltblown, spunbond, mhepo inopisa kana tsono punch, nezvimwewo, izvo zvine maitiro akaenzana ekuramba zvinwiwa, kusefa zvidimbu uye mabhakitiriya. Irwo rudzi rwemachira ekudzivirira machira. Inowanikwa pasi rose kutenga uye kugadzirisa, Kwese kwaunenge uri pasi, Tinogona kutora iyo odha toiendesa kwauri!
Inorasa Kuvhiya Kumeso Mask Kune Vana
Masks ekuvhiya ekurapa anodzivirira kupfuura masiki ekurapa, uye vana vanogona kuapfeka. Kana mwana wacho ari muduku zvikuru, zvinokurudzirwa kushandisa masikisi anokosha evana, saka rudzi rwakavharwa ruchava nani.
1. Kuti uve nechokwadi chehutano hwemwana, yakagadzirwa nechiyero chekuraswa mask yekuvhiya.
2. Kuti zvive nani kupfeka, yakagadzirwa nemhando yevana. Saizi yemasiki yemwana: 14.5 * 9.5cm.
KN95 mask kusefa kunyatsoita kunosvika 95%.
Vamwe vaongorori vakaita zvidzidzo zvinoenderana nezvekudzivirira uye kupfeka nguva yeN95 yekudzivirira yekurapa masks. Zvigumisiro zvakaratidza kuti kushandiswa kwefiltration kwakaramba kuri pamusoro pe95% uye kupikisa kwekufema hakuna kuchinja zvakanyanya mushure memazuva maviri ekupfeka maKN95 respirators. Sefa inoshanda yakaderedzwa kusvika 94.7% mushure memazuva matatu akapfeka.
Kana yakapfekwa nemazvo, kugona kweKN95's kusefa kwakakwirira pane kuya kweakajairwa uye ekurapa masks.
Chivharo chedu chekurapa chinochekwa nekusonewa nejira risiri rakarukwa sechinhu chikuru mbishi, uye chinopihwa chisiri chetsvina chekushandisa kamwe chete. Inowanzo shandiswa kuzviparadzanisa nevamwe mumakiriniki ekunze, wadhi, uye makamuri ekuongorora emasangano ekurapa.
Sarudza saizi yakakodzera ngowani, iyo inofanirwa kufukidza zvizere bvudzi pamusoro uye bvudzi, uye panofanira kunge paine bhandi rekusimbisa kana elastic band pamuromo weheti kudzivirira bvudzi kuti risapararire panguva yekushanda. Kune avo vane vhudzi refu, sungai vhudzi musati maisa chivharo uye sunga bvudzi mukepisi. Migumo yakavharwa yevhavha yekurapa inofanira kuiswa panzeve mbiri, uye kuiswa pahuma kana zvimwe zvikamu hazvibvumirwi.
Disposable Medical Anti-fog Anti-splash Face Shield
Zvishongo zvechiso chezvokurapa zvine chimwe chekudzivirira, chinhu chikuru ndechekuvhara mvura yemuviri, kuputika kweropa kana kuputika. Kazhinji inoumbwa nevhavha yekudzivirira yakagadzirwa ne polymer zvinhu, foam strip uye chigadziriso chekugadzirisa. Non-sterile kupa, kushandiswa kamwe chete.
Disposable Powder Yemahara Medical Latex Gloves
Latex magurovhosi imhando yemagirovhosi, akasiyana neakajairika magirovhosi uye anogadzirwa nelatex. Inogona kushandiswa seimba, maindasitiri, zvekurapa, runako uye mamwe maindasitiri, uye inodiwa inodzivirira ruoko chigadzirwa. Latex magurovhosi anogadzirwa neakasikwa latex uye anofananidzwa nezvimwe zvakanaka zvinowedzera. Zvigadzirwa zvine hunyanzvi hwekurapa pamusoro uye zvakagadzika kupfeka. Iwo anoshandiswa zvakanyanya mukugadzirwa kweindasitiri nekurima, kurapwa, uye hupenyu hwezuva nezuva.
Anoraswa Medical Blue Nitrile Gloves
Magurovhosi enitrile anoraswa:
Ikemikari yakagadzirwa zvinhu. Yakagadzirwa neacrylonitrile uye butadiene kuburikidza neakakosha maitiro ekurapa uye formula yekuvandudza.
Kufema uye nyaradzo zviri padyo nelatex magurovhosi, uye hapazovi neallergies yeganda. Magurovhosi eNitrile akagadzirwa mumakore achangopfuura. Munguva yekugadzira, vanogona kusvika padanho zana uye nhanho 1000 mushure mekuchenesa. Magirovhosi akawanda anoraswa ane upfu.
Inoraswa Nitrile Industrial Giredhi Grovhosi
Disposable Medical Dziviriro PVC Gloves
Polyvinyl chloride, inozivikanwa zviri nani sePVC, ndeye thermoplastic polymer inoshandiswa kupfeka kunze kwegirovhosi kuitira kudzivirira kubva kumakemikari, puncture, kucheka uye abrasion. Izvi zvakasiyana-siyana zvemagurovhosi ekudzivirira anoshandiswa munzvimbo dzinoverengeka dzebasa kudzivirira kubva kune dzakasiyana njodzi dzinogona kuitika. Mhando dzePVC girovhosi dzinosanganisira magirovhosi ekuchengetedza, magurovhosi ekurapa, magurovhosi erabhoritari uye magurovhosi emuindasitiri.
Inoraswa Vinyl Yakachena Kamuri Magurovhosi